Rosia · Desambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Rosia · Desambra, 2018
Jona 2022 1 Lahatsoratra
Mey 2022 5 Lahatsoratra
Avrily 2022 10 Lahatsoratra
Marsa 2022 16 Lahatsoratra
Janoary 2022 1 Lahatsoratra
Mey 2019 7 Lahatsoratra
Desambra 2018 6 Lahatsoratra
Novambra 2018 4 Lahatsoratra
Mey 2018 7 Lahatsoratra
Septambra 2017 3 Lahatsoratra
Jona 2017 11 Lahatsoratra
Mey 2017 19 Lahatsoratra
Avrily 2017 27 Lahatsoratra
Febroary 2017 11 Lahatsoratra
Desambra 2016 11 Lahatsoratra
Oktobra 2016 21 Lahatsoratra
Aogositra 2016 11 Lahatsoratra
Jona 2016 7 Lahatsoratra
Mey 2016 13 Lahatsoratra
Aogositra 2015 13 Lahatsoratra
Avrily 2015 5 Lahatsoratra
Desambra 2014 11 Lahatsoratra
Novambra 2014 7 Lahatsoratra
Jolay 2014 19 Lahatsoratra
Jona 2014 15 Lahatsoratra
Avrily 2014 10 Lahatsoratra
Febroary 2014 13 Lahatsoratra
Desambra 2013 15 Lahatsoratra
Novambra 2013 12 Lahatsoratra
Septambra 2013 7 Lahatsoratra
Avrily 2013 4 Lahatsoratra
Novambra 2012 11 Lahatsoratra
Marsa 2012 4 Lahatsoratra
Desambra 2011 6 Lahatsoratra
Jolay 2011 6 Lahatsoratra
Avrily 2008 5 Lahatsoratra
Marsa 2008 4 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Rosia tamin'ny Desambra, 2018
Chernobyl: Taratasy Tsy Nosoratana Mihitsy
Belarosia 31 Desambra 2018
Manoratra mikasika ny zavatra niainany tamin'ny naha miaramila noterena hanompo tany Chernobyl 20 taona lasa izay (Rosiàna) ny mpampiasa LJ wall4 - avy any Lviv, Okraina, izay ankehitriny monina ao Connecticut. Arahina sary marobe miloko fotsy sy mainty an'ny tafika ilay tantara.
Meksika: Nantenaina Hanova Zavatra ilay Ezaka Fandarohana Baomba
Amerika Latina 28 Desambra 2018
Na dia tsy nahatratra ny tanjony tao amin'ny Tanànan'i Meksika aza ilay daroka baomba, maro ireo bilaogera maminavina fiovàna. Misy ireo mihevitra fa hiova ireo lalàna, hamela ny fikarohana tsy misy didy sy ny fangiazana tsy ara-dalàna, ao kosa ireo mihevitra fa tsy ho azo antoka intsony ny fandehanana an-dàlambe
Rosia: “Spassibo / Misaotra!” Na Ny Tsenambarotra Firaisankina Ao Rosia
Hevitra 27 Desambra 2018
Ny "Spassibo!" dia maritsena fanaovantsoa manana ny endrika, vaovao ao Rosia, toy an'ny "tseana fiantrana", ary koa vondrona fandaharanasa sosialy mifandraika amin'ny tontolo iainana, amin'ny fiofanana ary amin'ny kolontsaina.
Serbia: Misafidy, na i Tadic na i Nikolic
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Desambra 2018
Bilaogera Serba maro no manohana an'i Tadic sy ny fifandraisana akaiky kokoa eo amin'i Serbia sy ny Firaisambe Eoropeana, ary manohitra ny politika nasionalistan'i Nikolic. Ny sasany kosa anefa diso fanantenana amin'ny politikan'i Tadic nandritra ny fitondrany teo aloha ary mino fa nampahery ireo radikaly izany.
Zeorzia/Rosia: Mamahana Mpandroba Sy Mpitsoaponenana
Zeorzia 05 Desambra 2018
Ry Zeorziana, ampy izay ny ady fanapariahambaovao. Tsiriho avy eny am-baravarankely, hita eto ireo sekoly garabola sy ireo sekoly hipoka mpitsoaponenana. Anatero izay mba azonareo omena izy ireo, ary avy eo mandehana any amin'ny masoivohon'i Rosia. [...]
Rosia: Politika Sy Fanakona-masoandro Tao Samara
Fahalalahàna miteny 03 Desambra 2018
Ny 1 Aogositra 2008, andron'ny fanakonana tanteraka ny masoandro, tao an-tananàn'i Samara i Oleg Klimov, ilay Rosiana mpaka sary fanao an-gazety mba hihaona amin'ireo solontenan'ny mpanohitra eo an-toerana.